Fri, Feb 28, 2020 at 11:13am
शुक्रबार, २० भाद्र २०७६,	आहाखबर	1.23K
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहीबार डेङ्गु परीक्षण गर्ने बिरामीको लाइन निक्कै लामो थियो । अस्पतालबाट इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कार्यालयसम्मै लाइनले नपुगेर अस्पताल परिसरमा बिरामीको बाक्लै भीड पनि थियोे । टिकट काट्ने लाम त्यत्तिकै लामो थियो भने ज्वरो आएका बिरामी सकिनसकी भीडमा चिकित्सकको पालो कुरिरहेका थिए । ज्वरो युनिटको बहिरङ्ग (ओपीडी)मा मात्र सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनःलगायत अन्य चार जना चिकित्सक बिरामी जाँच्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।
ललितपुरको पुल्चोकबाट डेङ्गु भएको आशङ्कामा उपचार गराउन आउनुभएका विनोद मानन्धरले आफूलाई ज्वरो आएर ठीक नभएको, शरीर गल्ने, पिँडुला दुख्नेजस्ता समस्या भएपछि अस्पताल आएको बताउनुभयो । काठमाडौँ ताहाचलकी आशिष्मा शर्माले पनि ज्वरो आएपछि डरले जँचाउन अस्पताल आएको बताउनुभयो । त्यस्तै राजधानीकै बानेश्वरबाट आएका सञ्जय घिमिरे पनि डेङ्गुसँंग मिल्दो लक्षण भएपछि थप परीक्षणका लागि अस्पताल आउनुभएको हो । मानन्धर, शर्मा र घिमिरेजस्ता सयौँ व्यक्ति डेङ्गु उपचारका लागि अस्पताल आएर चिकित्सकको प्रतीक्षामा थिए ।
जाडो मौसममा सरुवा रोग अस्पताल पुग्दा एकदुई जना बिरामी भेट्टाउन पनि मुस्किल हुने टेकु अस्पतालमा बितेका केही दिनयता आफूलाई डेङ्गु सङ्क्रमण भएको हो कि भन्दै परीक्षण गराउन आउनेको भीड दैनिक लागेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले जाडो मौसममा मुस्किलले दैनिक ५० देखि ६० जनासम्म बिरामी आउने गरेकामा अहिले दैनिक पाँच सयदेखि आठ सयसम्म बिरामी आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
टेकु अस्पतालमा भक्तपुर, लतितपुर, बालाजु, कलङ्की, बल्खु, बानेश्वरलगायतका स्थानबाट दैनिक सयौँ बिरामी आउन थालेका छन् । सामान्य ज्वरो आएका बिरामी पनि डेङ्गु नै हो कि भनेर परीक्षणका लागि आइरहेका छन् । केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकामा समेत डेङ्गुको सन्त्रास बढिरहेको छ । टेकु अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षण गरिएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिलाई डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपचारसँगै रोग लाग्नै नदिने गरी स्वास्थ्य चेतना विस्तार र सरसफाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनचेतना, लार्भा नष्ट गर्ने काम, घरघरमा गएर खोज र नष्ट गर्ने कार्य भने सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । डेङ्गु भइसकेपछि उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीको उपचारको जिम्मा स्वास्थ्यको भएको भन्दै उहाँले नगरपालिका, गाउँपालिका, अन्य मन्त्रालयले आआफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । उपचारभन्दा पनि सरसफाइ र लार्भा नष्ट नगरी डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै डा. बास्तोलाले जिम्मेवार पक्षले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डेङ्गु नियन्त्रणमा स्वास्थ्य क्षेत्रले केही नगरेको भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उहाँले सरसफाइ गर्ने र लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने काम स्वास्थ्यसम्बद्ध क्षेत्रको मात्र नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको बजेट पनि स्थानीय निकायमा गएकाले तत्काल काममा उत्रन सुझाव दिनुभयो । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बिहीबार मात्र ११७ जनामा डेङ्गु पोजेटिभ देखिएको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप व्यक्तिमा पनि हुन सक्ने तर रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुने बताउनुभयोे । टेकु अस्पतालका दुई चिकित्सकसहित ११ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको छ । गोरखापत्रबाट